Sannad Kadib Maxaa Kasoo Baxay Dilkii Jamal Khashoggi? | #1Araweelo News Network
Sannad Kadib Maxaa Kasoo Baxay Dilkii Jamal Khashoggi?
Kooxaha u ololeeya Xuquuqda Aadamaha waxay dalbanayaan in cadaallad ay helaan qoyska weriyihii caanka ahaa ee Sacuudiga u dhashay Jamal Khashoggi, sannad ka dib markii lagu dilay Turkiga.
Maamulka Sacuudiga weli ma muujin “isla xisaabtan macno leh”, ayey qortay wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaysa hay’addaha Xuquuuqda Aadamaha.
Hay’addahan waxay Boqortooyada ka dalbanayaan in la sii daayo dad kale oo dowladda dhalleeceyn jiray oo weli xabsiyo ku jiraan.
“Maamulka Sacuudiga wuxuu xannibay isla xisaabtan wax ku ool ah oo la xidhiidha dilkii Khashoggi,” ayey tidhi hay’adda u dooda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch.
Hay’adda waxay cambaareysay hadalkii dhowaan ka soo yeedhay dhaxal sugaha Boqortooyada Sacuudiga, Maxamed Bin Salmaan oo sheegay in uu aqbalay in masuuliyad wadareed ay ahayd dilkii Khashoggi, balse wuxuu beeniyay in isaga si shaqsi ah loogu eedeeyo arrinta.
Dibadbaxyo ka dhacay duleedka safaaradda Sacuudiga ee Mareykanka, lix maalmood ka dib markii la waayay, sawirkan wuxuu ka mid ahaa kuwii ay siteen dadkii isu soo baxay
Dhimashadiisa aan xogta saxda ah laga helin ayaa cadho badan usoo jiidday boqortooyada Sacuudi Carabiya, taasoo kasoo saartay warar is khilaafsan oo ku saabsan halka uu ku dambeeyay.
Muxuu yidhi Wargeysku?
Wargeyska ayaa sheegay in Jamaal uu dadkii dilayay u sheegay in aanay afkiisa xidhin
Wargeyska Sabah wuxuu horay ciwaanno badan oo caalami ah uga sameeyay macluumaadka ku saabsan dilka wariyaha – waxaana ka mid ahaa warar muran abuuray – oo la xidhiidha dhimasada Jamaal Khaashuqji.
Isbuucan wuxuu daabacay labo warbixinood oo lagu faahfaahinayo dhimashada Khaashuqji oo ay ka dambeeyeen koox uu ku tilmaamay “kuwa dilalka fuliya”.
Qormadza waxaa lagu xusay xog ku saabsan inuu nin khabiir ku ah dilalka qorsheysan, oo ka mid ahaa kooxda laga soo diray Sacuudiga, kaasoo wariyaha ku tilmaamay inuu yahay “xayawaan loo dilayo danta guud”.
Ku dhawaad 1 sano ayaa kasoo wareegtay dhimashada Jamaal Khaashuqji
Wuxuu markaas ka dib raggii dilayay u sheegay in aanay afkiisa xidhin maadaama uu qabo xanuunka neefta, laakiin isla markiiba uu miyir beelay.
Khaashuqji waxaa lagu neef qabateeyay bac madaxa loo galiyay, sida uu sheegay wargeyska Sabah oo xiganayay sanqadhaha laga maqlayay codka ku duubnaa cajaladda.
Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in cajalada uu duubay sanqadha ku saabsan in la jarjaray meydka Khaashuqji, waxaana falkaas geystay ninka khabiirka ku ah dilalka.
Wali lama helin meydka Jamaal
Wararka ku saabsan inay jirtay cajalad uu ku duuban yahay dilka Jamaal Khaashuqji ayaa la isla dhex marayay tan iyo sanadkii lasoo dhaafay.
Saraakiisha Turkiga ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in cajaladaasi jirto, waxayna sheegeen inay la wadaageen dowlado caalami ah, laakiin wali ma cadda sida uu wargeyskan ku helay.
Horaantii sanadkan, Khabiir ka tirsan Qaramada Midoobay oo ku takhasusay arrimaha la xidhiidha dilalka aan sharciga loo marin ayaa ku baaqday in baadhitaanno madax bannaan lagu sameeyo dhimashada wariyahaas.
Agnes Callamard ayaa eerida Jamaal Khaashuqji ku qeexday “Dil aan geed loogu gabbanin” waxayna sheegtay in “ay mas’uul ka tahay dowladda Sacuudi Carabiya”, loona baahan yahay in baadhitaanno lagu sameeyo.